Abathengisi bezindlu Iyathengiswa eNoida, e-Uttar Pradesh
Real Estate Listings: Real Estate Agent Directory Real Estate Agents Uttar Pradesh Noida
Real Estate Agents in Noida, Uttar Pradesh
INoida, emfishane yeNew Okhla Industrial Development Authority, ingumuzi ohleliwe ophethwe yiNew Okhla Industrial Development Authority (ebizwa nangokuthi yi-NOIDA). Yidolobha le-satellite le-Delhi futhi liyingxenye yeNational Capital Region yaseNdiya. Ngokuya kwemibiko yesikhashana yeCensus of India, inani labantu baseNoida ngonyaka we-2011 lalingama-642,381. INoida itholakala eGautam Buddh Nagar esifundeni sase-Uttar Pradesh esiseduzane ne-NCT yase Delhi. Indlunkulu yabaphathi besifunda isedolobheni eliseduzane leGreater Noida. Leli dolobha liyingxenye yesifunda saseNoida (Vidhan Sabha) nesifunda saseGautam Buddha Nagar (Lok Sabha). UNgqongqoshe Wezemicimbi Yezamasiko Nezokuvakasha, uMahesh Sharma, ungomunye weLok Sabha MP weGautam Buddha Nagar, kanti uPankaj Singh unguMLA waseNoida. INoida wabekwa njengeDolobha elihamba phambili e-Uttar Pradesh kanye nedolobha elihamba phambili kwezezindlu kulo lonke elaseNdiya. kuma "Best City Awards" aqhutshwa ngabakwa-ABP News ngonyaka ka-2015. UNoida ungene esikhundleni iMumbai njengendawo yesibili ehamba phambili, ngokusho kombiko womhlaziyi. Imigwaqo eNoida ifakwe umugqa ngezihlahla futhi ibhekwa njengedolobha eliluhlaza kakhulu eNdiya elinesembozo esiluhlaza cishe esingu-50%, eliphakeme kakhulu kunoma yiliphi idolobha eNdiya.Inokulinganisa kwe-GDP cishe kwamaRandi ayizigidigidi ezingama-25 ukusukela ngo-2019.
Umthengisi wezezakhiwo noma umthengisi wezezakhiwo (ngokuvamile obizwa ngokuthi umthengisi wezezakhiwo) ngumuntu osebenza njengomxhumanisi phakathi kwabathengisi nabathengi bezindlu / izindlu zangempela kanye nemizamo yokufanisa nabathengisi abafisa ukuthengisa nabathengi abafisa ukuthenga . E-United States, ubudlelwano babuqalwa ekuqaleni ngokubhekisela emthethweni ojwayelekile wase-English ejensi, lapho umthengisi enobuhlobo obuyimfihlo namakhasimende akhe. Umthengisi wezezakhiwo ngokuvamile uthola inkokhelo ebizwa ngokuthi yikhomishini yokufanisa ngempumelelo indawo yomthengisi nomthengi ngendlela yokuthi intengiso ingenziwa. Le khomishini ingahlukaniswa nabanye ababambiqhaza bezakhiwo noma ababambiqhaza ababambe iqhaza lapho kusebenza. Umenzeli wezezakhiwo, okuyigama elisetshenziswa e-United Kingdom, ngumuntu noma ibhizinisi lebhizinisi lakhe elithengisa ngempahla yendawo egameni lamakhasimende. Kunokwehluka okubalulekile phakathi kwezenzo, amandla, izibopho kanye nezikweletu zabathengi nabathengisi bezindlu ezweni ngalinye. Amanye amazwe athatha izindlela ezahlukahlukene zokukhangisa nokuthengisa impahla yangempela. E-United States, noma kunjalo, abathengisi bezindawo kanye nabathengisi babo abasiza abanikazi ukumaketha, ukuthengisa, noma ukuqashisa izakhiwo ngokuvamile kubizwa ngokuthi "uhlu lwabathengi" kanye "nohlu lwamagama."  Abathengi abanohlu nabahlinzeki bafuna ukumaketha nokuthengisa noma ukuqashisa impahla ngentengo ephezulu etholakalayo ngaphansi kwemigomo etholakalayo engcono. Abanye abathengisi nabenzeli bangagxila ekumeleleni abathengi noma abaqashi. Kodwa-ke, ukunikezwa kwamalayisense njengomthengisi noma umthengisi kugunyaza umnikazi welayisensi ukumela izinhlangothi zombili izinhlangothi zomsebenzi. Ukuzikhethela ukuthi yiluphi uhlangothi oluzomela isinqumo sebhizinisi somnikazi welayisensi.